Nagarik Shukrabar - मगन्ते सरकार
शनिबार, ०६ कार्तिक २०७८, ०८ : ०६
शुक्रबार, २७ भदौ २०७६, ११ : २० | शुक्रवार
चीनबाट चुच्चे रेल आउला भन्ने आशामा रहेका नेपालीले यस पटक त्यसको औपचारिक घोषणा पनि आउला कि भन्ने अपेक्षामा थिए। तर नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री याङ यीले पाल दिने पो भएछन् !
उनी नेपाल आएका बेला नेपाली समकक्षी प्रदीप ज्ञवालीसँग तीनवटा सम्झौता गरेछन्। ती तीनमध्ये एउटा सम्झौता चाहिँ नेपाललाई पाँच हजार थान पाल दिने सहमति रहेछ !
अब यसै मगन्ते, उसै मगन्ते ! यस्तो भएपछि अलि गतिलो चिज मागेको भए पनि हुन्थ्यो ! तर चिनियाँहरु पनि के कम !
मगन्तेको हैसियतअनुसार दिने हुन् ! त्यसैले यिनलाई थाङ्नामा सुताउनका लागि पाल जत्तिको गतिलो चाल के हुनसक्छ !
झन् चिनियाँहरुको सबैभन्दा ठूलो सहयोग त भाषा शिक्षण हो। हिन्दी फिल्म हेर्दाहेर्दा हिन्दी सिकेका नेपालीको राष्ट्रिय भाषा नै हिन्दी होला जस्तो भइसक्यो ! अब किन एउटा मात्र विदेशी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने ? थप अर्को भाषालाई पनि राष्ट्रिय भाषाका रुपमा मान्यता दिलाएर चट्टसँगले दुई ठूला ढुङ्गाबीचको तरुलले आफूलाई सन्तुलित त बनाउनै प-यो !
यो जत्तिको राष्ट्रहित नेपालका लागि के हुन सक्छ ! त्यसैले हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीको बुझाइप्रति हामीले गर्व गर्न जान्नु पर्छ।
रमाइलो त के छ भने भूकम्पका चार वर्ष बितिसके। यस्तोमा कयौँ घर अझै पनि टेन्टमै छन्। कतै चिनियाँहरुले व्यंग्य त गरेका होइनन् ? जाबो टेन्ट छाडेर घरभित्र छिर्ने औकात छैन, रेलको सपना देख्ने ? यस्तालाई टेन्टको टेन्टमै नबसालेर कसरी रेलमा गुडाउने ?
तर एउटा कुरा चाहिँ गज्जबकै मान्नु पर्छ, ‘मासु छाडी गुन्द्रुकको झोलको इज्जत !’ मगन्तेको हैसियत पनि त गुन्द्रुक नै हो नि ! कि कसो ?